Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga LG in macruufka Devices
Apple ayaa barato ah qurbaan macaamiisheeda oo aan kaliya-dhamaadka sare iyo bandhig ay ka sarreeyaan farsamo, laakiin waxaa sidoo kale la olaga iyo jiitaan macaamiisha ah oo ay la design caato ah oo quruxsan. Iyadoo sii dheer ugu dambeeyay ee iPhone 6s (Plus) iyo iPhone 6 (Plus) si ay u qoyska ee qalabka macruufka, Apple ayaa soo jiitay saldhig macaamiisha waaweyn in waxyaabaha ay. Sidaa darteed, dad badan ayaa la wareegaya qalabka in ay la kulmaan Apple extravaganza ugu dambeeyay.
Mase qalabka micnaheedu waa inay tixgeliyaan xogta oo dhan ee qalabka hore. Inta badan dadka isticmaala ay doonayaan in ay sii xogta iyo waxay rabaan inay awoodaan in ay sidoo kale helaan in qalabka cusub. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka in dadku ay u bedesheen oo ka LG in macruufka la kulmi karaan halka macluumaadka wareejinta waa:
1. qalabka LG ku jira hindisooyin Android halka qalabka macruufka yihiin, si wanaagsan, qalabka macruufka. Sidaas daraaddeed waxaa xog madal arrin aad u kala iibsiga cross.
2. Inkasta oo ay tahay mid fudud si ay u gudbiyaan xiriirada, jadwalka iyo sawiro via xisaab Google, music baahan yahay in la synced in Lugood taas oo ah sheeko oo kala duwan oo dhan.
3. Ma jiro wax la isticmaalayo oo farriimo lagu wareejin karaa LG qalabka macruufka si toos ah.
Si wax loogu qabto dhibaatooyinkan oo badan, waxaan isticmaali doonaa Wondershare Mobile Trans in xogta laga LG wareejiyo qalabka macruufka ee qodobkan. Wondershare MobileTrans Waa xal hal-click dhammaan dhibaatooyinka aad kala iibsiga xogta mobile iyo qaar badan oo a. Waa korontada kuu oggolaanaysa in aad la abuuro hayaan, soo celiyo qalabka la isticmaalayo hayaan pre-jira, xogta kala iibsiga ka mid qalab si kale si toos ah iyo dejinta xogta ka iCloud. Iyada oo taageero kala duwan weyn ee qalabka kala duwan in ay yihiin Android, Windows, macruufka ama xataa Symbian, Wondershare MobileTrans waa software aad dhaqaale laga heli karaa kaliya $19.95 loogu isticmaalo hal mar. Waxa ay taageertaa labada Windows iyo OS MAC oo lagala soo bixi karaa http://www.wondershare.com/phone-transfer/ .
Si aad xog ka qalab LG wareejiyo qalabka macruufka, qaabkan soo socda:
1. Download Wondershare MobileTrans si aad u computer ama laptop. Sug waxaa loo soo dajiyo iyo abuurtaan barnaamijka mar rakibo waa dhameystiran yahay.
2. Isku aad qalabka LG iyo macruufka u yihiin in laptop ama computer via fiilooyinka USB. Wondershare MobileTrans Toos ah lagu ogaan doonaa qalab iyo soo bandhigaan daaqad la mid ah mid hoos ku qoran.
3. Ogeysiiska in xarunta ee shaashadda jiro ah "Flip" button. By fudud gujinaya ku yaal, waxaad samayn kartaa isha, ka caga iyo qeybsanaan ku xigeenka. Menu midig hoos ku badhanka Flip waxaa loo isticmaali karaa in ay doortaan oo dhan alaabta xogta aad doonayso in aad ku wareejin ka LG in aad qalab macruufka ah. Hubi ama uncheck waxyaabaha sida aad looga baahan yahay oo guji "Start Copy" marka aad dhamaysid.
4. Wax yar, shaashad muuqan doona oo muujinaya horumarka habka wareejinta. Waxaad u isticmaali kartaa si ay ula socdaan horumarka kala iibsiga. Ogow in midkoodna qalabka waa in la go'ay computer, halka kala iibsiga ayaa weli socda. Si kastaba ha ahaatee, waxaad had iyo jeer uga jari karaa qalabka ka dib markii gujinaya "Cancel" ama marka nidaamka la dhamaystiro si guul leh.
5. Marka geedi socodku waa dhameystiran waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan dhammaan xogta ka qalab LG in aad qalab macruufka goobtii. Ogsoonow in Wondershare MobileTrans ma ahan oo keliya kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow, laakiin waxa had iyo jeer kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso Guda wac, fariimaha, jadwalka iyo xitaa barnaamijyadooda. Waxaas oo dhan kharash ku click hal!
Haddii kale, waxaad gurmad ugu horeysay kartaa LG qalab si aad u computer isticmaalaya Wondershare MobileTrans ka dibna loo soo celiyo qalabka macruufka isticmaalaya gurmad in. Si aad u qaadato wadada ficilkan, raac tallaabooyinkan:
1. Connect kaliya aad LG qalab si aad laptop ama computer iyo bandhigista Wondershare MobileTrans. Laga soo bilaabo menu guriga inay tagaan si ay gurmad. Dooro dhamaan waxyaabaha xogta in aad rabto in aad ku sii gurmad ah iyaga oo hubinaya ka menu dhexe ee shaashadda oo ku dhacay "Start Copy".
2. Sug faylka gurmad in ay gabi ahaanba nuqul. Waqtiga lagu qaato u gurmad ah si ay u dhamaystiraan ku xiran tahay tirada xogta loo baahan yahay in la soo guuriyeen.
3. Marka gurmad waa dhameystiran, jari lahaayeen qalab LG ka kombiyuutarka iyo lifaaq halkii qalab macruufka ah. Tag menu guriga mar kale iyo dooro "Soo Celinta". Meel aad gurmad file ka screen soo socda oo calaamadee dhammaan waxyaabaha aad doonayso in aad nuqul ka si aad qalab macruufka ah. Guji "Start Copy" marka aad dhamaysid.
4. Sug soo celin si uu u dhameystiro. Marka waa dhameystiran yahay waxaad u baahan doontaa dhammaan xogta ka LG guuriyeen galay aad qalab macruufka ah.
Inkasta oo labaduba ka mid ah hababka kala hadlay kor ku xusan wax la mid ah laakiin ka mid faa'iido ah ka dib in ka badan hore ugu sameeyaan waa in ay u oggolaanaysa in nuqul ka mid ah gurmad inuu sii joogo your computer. Qaabkan waxaad had iyo jeer ku yeelan kartaa nuqul in soo haan ay dhacdo in aad u baahan tahay in la tuuro-off qalab LG ama haddii aad shil furo xogta qaar ka mid ah.
Waa kuwee iPhone aad hadda isticmaashid? Codeeyaan qalab aad iyo aragno oo iPhone ugu cadcad yahay wadnaha buuxda hadda!
1. 6s iPhone (More)
2. iPhone 6 (More)
Ma dooneysaa in aad hoos ka macruufka 9 ilaa macruufka 8.4? Sida loo sameeyo
Sida loo Download Free Music for macruufka Devices
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Acer in macruufka Devices
Sida loo badbaadi Facebook Rasuulka Messages on macruufka
Waa maxay New ee Apple macruufka 7.1 iyo arrimaha u baahan tahay inaad fiiro
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Photos ka dib markii Casriyaynta in macruufka 7/8/9
Best macruufka Photo siladda in View Photos on macruufka Devices
Tababare Best macruufka Photo loo maareeyo Photos on macruufka Devices
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga LG in macruufka Devices